आध्यात्मिक परिभाषा अनुसार मन र आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने क्रियालाई योग भनिन्छ । शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा शान्त र आध्यात्मिक रूपमा उच्च चेतनायुक्त भएर जिउने कलालाई पनि योग भनिन्छ । संस्कृत भाषामा योगलाई जोड्नु भनेर बुझिन्छ । योग नेपालको हिमालय क्षेत्रमा जन्मिएर उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै विश्वभरि पैmलिएको कला, संस्कृति र विज्ञान हो । नेपालका तीन महत्त्वपूर्ण सभ्यता हुन्ः हिमालय क्षेत्रमा जन्मिएको शिव सभ्यता, जनकपुरमा जन्मिएको जनक सभ्यता र लुम्बिनीमा जन्मिएको बुद्ध सभ्यता ।
१) आदिकाल खण्ड: आदिकाल खण्डमा योगको विस्तार भयो । योग सबै र सधैँका लागि हो भन्ने बुझियो । जतिबेला एउटा आदर्श जीवनको परिकल्पना गरिन्थ्यो र अभ्यास गरिन्थ्यो ।
२. मध्यकाल खण्ड: मध्यकाल खण्ड आएपछि योग समाजबाट विस्तारै अलग्गिँदै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै गयो । समाजको ठूलो हिस्साले दैनिक रूपमा व्यवहारमा उपयोग ल्याउन सकेन ।
३. तेस्रो कालखण्ड: तेस्रो कालखण्डमा आज हामी बसेका छौँ त्यही नै हो । यो कालखण्डमा योगलाई फेरि हामीले चिकित्सा शास्त्रसँग लगेर जोड्न थाल्याँै । विस्तारलाई हामीले उपचारको संज्ञा दिन थाल्यौँ । यो रोगीहरुका लागि उल्लेखनीय रोग मुक्तिका लागि हो । अझ विशेषगरी नसर्ने रोगहरुमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ भन्नेतिर बढी केन्द्रित भयौँ । अहिलेको समाजको स्वास्थ्यको रक्षा र रोगीको उपचारका लागि यो बढी केन्द्रित भएर अगाडि बढेको देखिन्छ ।
योगको उद्गम स्थल नेपाली भूमिमा नै भएको पूर्ण विश्वास गरिन्छ । भगवान शिवले पत्नी पार्वती मातालाई पहिलो पटक योग शिक्षा दिएको विभिन्न शास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । शिव र पार्वतीबीचको संवादलाई प्रचार प्रसार गरी यो संसारभरि पैmलिएको पुष्टि हाम्रा  ऋषिमुनिहरुले शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइएको छ । बीचमा लुप्तप्रायः भए पनि पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालेपछि योगको पुनर्जागरण भएको पाइएको छ । भगवान गौतम बुद्धदेखि क्राइस्टसम्म शिवदेखि कृष्णसम्म अनि अन्य विभिन्न दर्शन केन्द्रित महात्माहरुले आफ्नो जीवनकालमा योग अभ्यास गरेका तथ्यहरु विभिन्न पुस्तकमा पाइन्छ । ईश्वरले मानवजातिलाई वरदान स्वरूप दिएको आशीर्वादलाई ऋषिमुनिहरुले गरेको उजागर नै हो योग ।  साधनको माध्यमबाट शरीर व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हो योग ।
योगको आवश्यकता र फाइदाहरु:
योग ध्यान गर्नका लागि सबैभन्दा योगलाई अँगाल्नुपर्छ त्यसपछि ध्यान आफै बढ्दै जान्छ । नेपालमा मानिसहरु विभिन्न रोगहरुबाट ग्रसित छन् । रासायनिक मल, खानामा विषादीको प्रयोग, अव्यवस्थित बसोबास, भागदौड, यतिसम्म कि मानिस आफूले आफैलाई चिन्न पनि छोडिसकेको अवस्था आइपुगेको छ । आफ्नो लागि समय पनि छैन, व्यस्थताको कारण । तसर्थ हामीले हाम्रो दैनिक दिनचर्यामा बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समय एक डेढ घण्टा निकाल्न सक्यौँ र योग थाल्यौ भने साँच्चिकै ने हामीले हाम्रो जीवनमा स्वर्गीय आनन्द पाउनेछौँ । हाम्रो शरीरलाई दैनिक एक घण्टा  योगाभ्यासमा लगाउन सक्यौँ भने बाँकी २३ घण्टा हामीले स्वस्थ र स्फूर्तिका साथ कार्य गर्न सक्दछौँ । अझ यो कोभिड–१९ को महामारीमा आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबुद बनाउन त झन योगाभ्यास अपरिहार्य नै देखिएको छ ।
लेखक योग प्रशिक्षक हुन् ।